June 19, 2022 adminLeaveaComment on यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन !
विवाह गर्ने उमेर घट्यो, अब कति बर्षमा गर्न पाइन्छ ?
June 19, 2022 adminLeaveaComment on विवाह गर्ने उमेर घट्यो, अब कति बर्षमा गर्न पाइन्छ ?
विवाह गर्ने उमेर घट्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले विवाहको उमेर २० बर्षलाई घटाउने भएको हो ।कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाका अनुसार विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाउनका लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिएका छन् । कानुन मन्त्रालयले विवाहको उमेर २० वर्ष राख्दा अपराध बढेको र बाल विवाहमा सजाय भइरहेको भन्दै कानुन […]
June 19, 2022 adminLeaveaComment on श्रीमानलाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्यै श्रीमानलाई प्रगती गर्न दिदैनन !
श्रीमान्लाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाइ प्रगती गर्न दिदैनन ! चाहे जसले जे भनोस श्रीमान भनेका देवता हुन् । श्रीमानहरु परिवारको लागि मर्न तयार हुन्छन । आफ्नो श्रीमान लाइ जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने हेपेर बोल्ने चिच्याएर बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन ! उक्तकुरा अध्ययन बाट प्रमाणित भएको […]
घरमा यस्ता चीज राख्नुभएकाे छ भने रिसाउँछिन् लक्ष्मी, वेवास्ता नगर्नुहाेला, नत्र बढ्छ गरिबी !
June 18, 2022 adminLeaveaComment on घरमा यस्ता चीज राख्नुभएकाे छ भने रिसाउँछिन् लक्ष्मी, वेवास्ता नगर्नुहाेला, नत्र बढ्छ गरिबी !
बास्तुको अनुसार घरमा टुटेफुटेका सामान राख्दा नकारात्मक उर्जा पैदा हुन्छ। यसका साथै आर्थिक रुपमा हानी नो`क्सानी हुने गर्छ। यति मात्र होइन घरमा भएका अनावश्यक टुटेका फुटेका सामानले मानसिक त`नावको कारण पनि बन्ने गर्छ । बाँकि निम्न छन्:- १) तस्बिर:- घरमा राखिएको तस्बिरका फ्रेम पनि फु-टेको वा चर्किएको छ भने तुरुन्तै हटाइदिनुपर्छ। च्यातिएको र यस्ता फु-टेका […]
आफ्नी श्रीमतीलाई औधी माया गर्छन यी चार राशि भएका पुरुष, तपाईको कुन राशि ?
June 14, 2022 adminLeaveaComment on आफ्नी श्रीमतीलाई औधी माया गर्छन यी चार राशि भएका पुरुष, तपाईको कुन राशि ?
काठमाडौँ । भनिन्छ, श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल र माया प्रेम हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ ।कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ । तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ । कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने […]
लोग्ने मान्छेले अ’र्काकी स्वा’स्नी फकाउन मिल्छ भने म’हिलाले अ’र्काको लोग्ने फ’काउन कि’न मि’ल्दैन……?
June 12, 2022 adminLeaveaComment on लोग्ने मान्छेले अ’र्काकी स्वा’स्नी फकाउन मिल्छ भने म’हिलाले अ’र्काको लोग्ने फ’काउन कि’न मि’ल्दैन……?
महिलाभित्र देखा पर्ने दमित प्रेम र यौ न लाई अक्षरमा उतार्ने लेखिका हुन् । अभिलासा २०६३ कविता संग्रह, अभिषेक २०६६ उपन्यास तथा तिम्रो लोग्ने र म २०७१ गरी ३ वटा पुस्तक बजारमा ल्याइसकेकी निरुपा पुराना कवि चितवन शिखरवासकी छोरी हुन् । कथा संग्रह ‘तिम्रो लोग्ने र म’ बजारमा आएपछि उनी आलोचितसमेत भएकी थिइन् । प्रसिद्ध […]
भाग्य बदलिन छोरी नै जन्मिनु पर्छ……
June 12, 2022 adminLeaveaComment on भाग्य बदलिन छोरी नै जन्मिनु पर्छ……
काठमाडौं : स्त्री हरुकाे स्वभाव र पुरुषहरुको भाग्य स्वयम् भगवान् लाई पनि थाहा हुदैन कहिले र कहाँ गएर परिवर्तन हुन्छ भनेर ।मनिसकाे भाग्य तीन तरिकाबाट परिवर्तन हुन्छ भनेर ज्याेतिष तथा वस्तुशास्त्रका ठूलाठूला ग्रन्थ हरुमा उल्लेख गरिएकाे छ । घर बनाएर नयाँ घरमा सर्दा खेरि त्यस्तै विवाह गरिसकेपछि र सन्तान जन्मेपछि मानिसको भाग्य परिवर्तन हुनेकुरा ज्याेतिषीहरुले […]
शरीरका यी स्थानमा कालो कोठी भएका व्यक्ति हुन्छन् धनवान र भाग्यशाली
June 7, 2022 adminLeaveaComment on शरीरका यी स्थानमा कालो कोठी भएका व्यक्ति हुन्छन् धनवान र भाग्यशाली
काठमाडौँ । समुद्रशास्त्रमा शरीरमा हुने सबै कालो कोठीको महत्व हुने गर्दछ। यी कोठीको पनि हाम्रो स्वभाव र भविष्यमा निकै ठूलो असर पर्ने गर्दछ।शरीरमा कुन स्थानमा कालो कोठी भएका व्यक्तिको स्वभाव कस्तो छ भन्ने बारे सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। आज हामी शरीरका यी स्थानमा कालो कोठी भएका व्यक्तिको स्वभावका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। नाभिको आसपास कालो कोठी:समुद्रशास्त्रका […]
सपनामा मृत्यु भइसकेका मानिस आउनुका ९ संकेत………
May 22, 2022 adminLeaveaComment on सपनामा मृत्यु भइसकेका मानिस आउनुका ९ संकेत………
सपना मानिसको जिवनको एक भाग हो । प्राय हामी सुतेको समयमा सपना देख्छौँ । स्वप्नशास्त्रका अनुसार सबै सपनाका आ–आफ्नै महत्व र अर्थ हुन्छन् । सपनाले भविष्यमा हुने कुनै घटनाका बारेमा संकेत दिइरहेका हुन्छन् । अनेक प्रकारका सपना देख्छौँ । ती मध्ये कहिले जिउँदो मानिस मरेको सपना देख्छौँ भने कहिले मृत्यु भइसकेका मानिस सपनामा आएको देख्छौँ […]
बच्चाको नाम राख्दा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र जीवनभर पछुतो हाेला
May 15, 2022 adminLeaveaComment on बच्चाको नाम राख्दा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र जीवनभर पछुतो हाेला
बच्चाको नाम राख्न अविभावकहरुलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने सम्पूर्ण जीवनमा ऊ उक्त नामले चिनिन्छ र बच्चाको नामले नै व्यक्तित्व झल्किन्छ । कुनै बच्चाहरुको नाम यस्तो हुन्छ कि मानिसहरुले उक्त नामलाई लिएर बच्चाको मजाक उडाउने गर्छन् । कुनैकुनै बच्चाको नाम उच्चारण गर्न निकै समस्या हुन्छ जसले गर्दा उक्त बच्चा अरुको अगाडी आफ्नो परिचय दिन अफ्ट्यारो मान्छ […]